Okpokoro isi nke ndi nwanyi - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Okpokoro isi Ụdị na ubu na-enye anya n 'ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ, na-eyi uwe na-achaghị aka ga-aga maka Tattoo Tattoo na ubu iji mee ka ndị mmadụ mara anya ha
2. Okpokoro isi Ụdị na azụ mee ka nwoke dị mma
Ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị ịnwe Tattoo Tattoo na azụ na-eji ncha ink ojii. Nke a na-enye anya dị mma
3. Ụkwụ Tattoo na ubu na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ ga-enwe mmasị na Tatull Tattoo na ubu ha na nhazi ime ink nke oji; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
4. Ụkwụ Tattoo na azụ na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma
Ụmụ nwanyị na-ahụ Tattoo Atụmatụ na azụ ya na nhazi ime anwụrụ ọkụ; egbu egbu egbu egbu a na-eme ka ha dị egwu
5. Okpokoro isi Ụdị na apata ụkwụ enye ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, karịsịa na obere uwe na mkpirisi dị mkpirikpi ga-aga maka Tattoo Tattoo na apata ụkwụ ha iji mee ka ha dịkwuo mma nye ụmụ nwoke.
6. Okpokoro isi Ụdị na azụ azụ na-eweta anya mara mma
Ụmụ agbọghọ dịka nkpuchi onk nke nwa mkpịsị na azụ azụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma.
7. Ụkwụ Tattoo na ubu ya na-eji aja aja na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown na-ahụ Tattoo Tattoo na ubu ya na nhazi ime anwụrụ ọkụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
8. Okpokoro isi Ụdị na ubu Mee ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na-eto eto ga-enwe mmasị na mkpịsị nkịkị a na-azụ mkpịsị ụkwụ na aka nri. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
9. Ụdị Tattoo na ejiji ink mara mma na-enye anya n 'ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-acha aka na-acha aka na-aga maka Tattoo Tattoo na ejiji ink mara mma nke dị n'akụkụ iji mee ka ndị mmadụ mara anya ha
10. Ụkpụrụ Tattoo na ubu ya na ejiji ink agba aja na-eme ka anya na-adọrọ adọrọ
Ụmụ agbọghọ ndị na-acha aja aja ga-enwe mmasị na mkpịsị ink na-acha aja aja. egbu egbu egbu a na-eme ha ka ha dị mma ma mara mma
11. Ụkpụrụ Tattoo na mkpịsị uhie na oji, nhazi osisi mee ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ na akpụkpọ ahụ na-acha uhie uhie na ntutu na-ahụ Ụkpụrụ Tatalị na mkpịsị oji na pink, imepụta osisi; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma mara mma
12. Okpokoro isi Ụdị na ọkara aka eme ka nwanyi yie anya
Ụmụ nwanyị Brown na-ahụ Tattoo Tattoo na ogwe aka dị n'elu; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
egbu egbu ebighi ebiAnkle TattoosEgwu ugoechiche egbugbundị mmụọ oziakara ntụpọGeometric Tattoosmehndi imewena-egbu egbuaka mma akaegbu egbu osisi lotusdi na nwunyearịlịka arịlịkana-adọ aka mmangwusi pusiazụ azụegbugbu egbugbukoi ika tattooỤdị ekpomkparip tattoosakwara obizodiac akara akaraenyí egbu egbuegbu egbuNtuba ntugharienyi kacha mma enyiaka akaegbu egbu mmirimma tattoosokpueze okpuezeUche obinnụnụegbugbu maka ụmụ agbọghọọdụm ọdụmagbụrụ ebon'olu oluọnwa tattoosaka akaegbu egbu egbuegbu egbu hennandị na-egbuke egbukeima ima mmaụkwụ akaudara okooko osisiụmụnne mgbuegbu egbu okpuakpị akpịegwu egwuegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu diamond